Hepsiburada တွင်ကားအရောင်းစတင် RayHaber
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်Hepsiburada အတွက်မော်တော်ကားအရောင်း Start ကို
28 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
မော်တော်ကားအရောင်း hepsiburada အတွက်စတင်ခဲ့
တူရကီရဲ့ဦးဆောင် e-commerce ပလက်ဖောင်း Hepsiburada, ကင်ပိန်းကားကိုယူချင်သူမြား၏မျက်နှာများပေါ်တွင်ပြုံးလိမ့်မယ်ကြေညာခဲ့သည်။ 28 10.00 Hepsiburada ရောင်းချခံရဖို့သြဂုတ်လနာရီန့်အသတ်တော့ရှယ်ယာ Egea Sedan Fiat မီးသတ်လွယ်ကူ 1.4 95 လက်စွဲစာအုပ် HP ကဓာတ်ဆီနဲ့မော်တော်ကားအတွက်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ အရစ်ကျ4အတွက်ငွေပမာဏကိုပေးဆောင်နိုင်ပါလိမ့်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်ဖို့ဆန္ဒရှိတဲ့သူတွေကိုပါ။
35 အမျိုးအစားထက်ပို 24 သန်းထုတ်ကုန်အကွာအဝေးအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအတွက်ဖြည့်ဆည်းဖို့, 100 သန်းဧည့်သည်များ Hepsiburada န်ထမ်းများ၏လိုအပ်ချက်များ, အွန်လိုင်းထုတ်ကုန်သမားရိုးကျမဟုတ်သောကုန်ပစ္စည်းရောင်းအား၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးမှဤအချိန်, ထိုမှတပါး, အလွန်အထူးလျှော့စျေးပါဝင်သည်သိရသည်။
ကန့်သတ်စတော့ရှယ်ယာနှင့်အတူသြဂုတ် 28 10.00 နာရီကားကိုသက်တမ်းတိုးဖို့ဤအခွင့်အလမ်းကိုယူချင်သူတွေကိုမှာစတင်ပါလိမ့်မယ်အားသာချက် Fiat Sedan လွယ်ကူ Egea မီးသတ် 1.4 95 HP ကကို manual ဂီယာကနေယစ်မျိုးခွန်နှုန်းထားများအတွက်တိုးလာကြောင့်ထိခိုက်သည်ဓာတ်ဆီကားကိုပိုင်ရှင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ယခင်ကကန့်သတ်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအပေါ်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ထုတ်ကုန်စုစုပေါင်းစျေးနှုန်းစတော့ရှယ်ယာနှင့်အတူနေ့ကိုတလျှောက်လုံးဆက်လက်မည်အမဲရောင်သောကြာနေ့ Hepsiburada အလားတူအလေ့အကျင့်အတွက်စေ့စပ်; ယစ်မျိုးခွန်, KDV နှင့်လိုင်စင်ပန်းကန်ကုန်ကျစရိတ်လည်းထည့်သွင်းထားပါသည်။
အများဆုံးအကျိုးရှိစျေးနှုန်းမှအကျိုးသူတို့သည်ကားထဲတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်, ထို့နောက်တာဝန်ရှိသူတဦး၏ပြည့်စုံသက်သေခံရှေ့နေအများပြည်သူသို့မဟုတ်အသွားအလာမှတ်ပုံတင်ရုံးများပြုမူကြောင်းသုညလှုပ်ရှားမှုကိုနှောင်းပိုင်း5အလုပ်လုပ်ရက်အတွင်းကားကိုရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါအချက်များကားတစ်စီးလှည်းကဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မည်သည့်အတွက်အစ္စတန်ဘူလ်, တူရကီ, Izmir, Antalya, Adana, Samsun, Bursa နှင့် Kutahya အတွက်ပေးပို့။
တပ်ဆင်ကားတစ်စီးရုရှားနိုင်ငံအတွင်းပြတ်လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးများ trolleybuses ကျော်ရှင်းပြီ 25 / 09 / 2012 ထရပ်ကားတွဲရုရှားရဲ့ဗလာဒီမာဝါယာကြိုးအသွားအလာမတော်တဆမှုရှငျဘုရငျကိုမတ်တပ်ရပ်ယာဉ်၏အလယ်ပိုင်းဒေသရှိဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဇောက်ထိုးလှည့်ပြိုလဲတတ်ခဲ့ဆွဲထုတ်။ ဗလာဒီမာရဲ့တစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်မတော်တဆထိခိုက်မှုအတွက်ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ Suzdal လမ်းလုံခြုံရေးကင်မရာများအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ လမ်းပေါ်မှာချရွေ့လျားနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်, လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးများထည့်သွင်းထားသောပုံဖမ်းတွန်းလှည်းဆွဲထုတ်ဖို့ဖြတ်သွားအခြားထရပ်ကား, ရှင်ဘုရင်သည်ထမော်တော်ကားမှောက်။ လက် tools များ၏ဖြစ်ရပ်၌၎င်း, ကယာဉ်မောင်းတစ်ဦးကျိုးနံရိုးခံစားခဲ့ရကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ယာဉ်အသွားအလာစစ်ဆေးရေးမှူးများ၏ပြည်ထဲရေးညွှန်ကြားမှု၏ဝန်ကြီးဌာနထရပ်ကားမောင်းသူထိန်းသိမ်းခံသောမတော်တဆထိခိုက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး။ ရဲကနေကြေငြာချက်မှာတော့ "ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများတင်ဆောင်လာသည့်ထရပ်ကားများယာဉ်မောင်း, ယခင်ကပုံဖမ်းတွန်းလှည်းဝါယာကြိုးဖြတ်လေ၏။ ဤသည်ကို download ...
နှစ်ခု၌ဝေဖန်ခဲ့သည့်Çankırıdရထားမော်တော်ကား Bicen (ဓာတ်ပုံပြခန်း-ဗီဒီယို) 26 / 02 / 2013 ရထားလမ်းလုပ်တဲ့စက်ခေါင်း၏ရလဒ်အဖြစ်စတီယာရင်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးဖို့Çankırıယာဉ်မောင်းခဲ့တဲ့အရာနှစ်ဦး Bicen အတွက်Çankırıdရထားကားဖြတ်2လူတို့သည်မိမိတို့အသက်ဆုံးရှုံးရလဒ်ပျံကားကိုရိုက်လေ၏။ အဆိုပါမတော်တဆမှုခရိုင်ခဲများကိုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ သတင်းအချက်အလက်များအရ, ဦးဆောင် input ကိုအတွက်စတီယာရင်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးယာဉ်မောင်း၏ရလဒ်ထိန်းချုပ်မှုထဲကရထားလမ်းကျော်ပျံသန်းအဖြစ် Halil '' ဃ, 66 18 ကေဗွီ-ချထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် Korgun ခဲ (093) ကိုသူ၏လမ်းပေါ်ခဲ့။ အဆိုပါရထားလမ်းကားပျံရထား၏လမ်းကြောင်းထဲမှာဖြတ်သန်းနေတဲ့ကုန်တင်ရထားခေါငျးဝင်တိုက်ခဲ့သည်။ ကားဒရိုင်ဘာမှပြန်လာသောအပိုင်းအစ၏သက်ရောက်မှုသူမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာကွယ်လွန်သွား Khalil (66) မိမိဇနီး Neriman (64) နဲ့ပြန်ခဲ့ပြန်ခဲ့။ ခရိုင်တွင်နေထိုင်သော Atkaracalar ...
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: ဇန်နဝါရီ 25 1884 Hijaz အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်တပ်မှူး Osman Nuri Pasha "ဟုအနာဂတ်Ceziret'ül-Arabi ခုနှစ်တွင် ... 25 / 01 / 2015 သမိုင်းဇန်နဝါရီလ 25 1884 Hijaz အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်တပ်မှူး Osman Nuri Pasha အတွက်ယနေ့ "အနာဂတ်မှာခုနှစ်တွင်စူလတန်နှင့်ဆိပ်ကမ်း၏Ceziret'ül-Arabi နှင့် Hijaz နှင့်ယီမင်တရားတွေ့ခွင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပူဇော်ကြ၏။ စာချွန်လွှာ, ဒမတ်စကတ်, Hijaz နှင့်ယီမင်နှင့်ယီမင်ပြည်နယ်အကြား Hejaz ရထားလမ်းနှင့်ကြေးနန်းလိုင်း၏တင်သောကြောင့်ပြင်ပခြိမ်းခြောက်မှုဆန့်ကျင်အရေးကွီးကွောငျးအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ 2016 ရဲ့လည်ချောင်းခြောက်ကားများထောက်ပံ့ပါလိမ့်မယ် | ဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်း 30 / 10 / 2014 ကားများထောက်ပံ့ဖို့ 2016 ရဲ့လည်ချောင်းခြောက်: ဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏ရေလက်ကြားအောက်မှာလမ်းကူးပေးလတံ့သောပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Lutfi Elvan, အစ္စတန်ဘူလ်, နှစ်တွင် 2016 Elvan ၏အဆုံးအားဖြင့်ပြီးစီးလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်ကား, အစ္စတန်ဘူလ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Vasip Şahinနှင့်အတူဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဆောက်လုပ်ရေးသွားရောက်ခဲ့သည်။ Göztepe - ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတစ်ခု 15 95 မီတာကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်Kazlıçeşmeမိနစ်အကြားစီစဉ်ထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်အလုပ်လက်ရှိပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက်နေဆဲဖြစ်သည်။ 5.4 ၏ပြီးစီးရှင်းပြပင်လယ်ကိုအောက်တွင်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏ 1.27 ကီလိုမီတာ, ပင်လယ်ပြင်နောက်ဆုံး 2015 ခြောက်လ 'passes ပြီးစီးခဲ့ပါလိမ့်မည် "Elven ကီလိုမီတာ။ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက် 14.6 ကီလိုမီတာဥမင်လိုဏ်ခေါင်း။ ဥရောပဘက်ခြမ်း 5.4 ကီလိုမီတာ, ခြောက်လ 5.4 Bosporus ၏အာရှဘက်ကီလိုမီတာ ...
လမ်းရထားကားတစ်စီး Kocaeile အတွက်မြေတွင်းထဲသို့ပြုတ်ကျ 12 / 06 / 2016 လမ်းရထားကားတစ်စီး Kocaeile အတွက်မြေတွင်းထဲသို့ပြုတ်ကျ: အ Boulevard အပေါ်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလမ်းရထားအကျင့်အားဖြင့်ဖုံးလွှမ်းနိုင်ငံသားများ၏ Mustafa Kemal တိုင်ကြားမှုများပြုသောအမှုဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့တွင်သားကောင်နေထိုင်နေနိုင်ငံသားများစက်ချုပ် Jamal အမည်ရှိခဲ့သည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြောင့်လမ်းရထား၏မော်တော်ယာဉ်အသွားအလာအပ်ချုပ်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်သောအရာ, လမ်းဖြတ်ကူးဖို့ကြိုးစားနေခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်တယ်, ဦးခေါင်းဗလာတွင်းစွဲယာဉ်အတွက်လမ်းရထားပေါက်ကောက်ချက်ချထားခဲ့တယ်။ အနီးအနားမှာနိုင်ငံသားတွေကိုယ်တိုင် tool ကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့ထံမှဖယ်ရှားပစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအဖြစ်အပျက်နှင့် ပတ်သက်. Jamal စက်ချုပ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်; 'ငါ့မော်တော်ယာဉ်မှအသေးစားပျက်စီးမှုရှိခဲ့သည်။ ကလေးသူငယ်အခပြိုလဲခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွား? ' သူကပြောနေမယ့်တုံ့ပြန်မှုပြသခဲ့သည်။
တပ်ဆင်ကားတစ်စီးရုရှားနိုင်ငံအတွင်းပြတ်လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးများ trolleybuses ကျော်ရှင်းပြီ
နှစ်ခု၌ဝေဖန်ခဲ့သည့်Çankırıdရထားမော်တော်ကား Bicen (ဓာတ်ပုံပြခန်း-ဗီဒီယို)
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: ဇန်နဝါရီ 25 1884 Hijaz အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်တပ်မှူး Osman Nuri Pasha "ဟုအနာဂတ်Ceziret'ül-Arabi ခုနှစ်တွင် ...
အဆိုပါ 2016 ရဲ့လည်ချောင်းခြောက်ကားများထောက်ပံ့ပါလိမ့်မယ် | ဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်း
လမ်းရထားကားတစ်စီး Kocaeile အတွက်မြေတွင်းထဲသို့ပြုတ်ကျ
အင်္ဂလန်မှာသေလွန်သောသူတို့သည်ရထားကား Collider 2
ဣသရေလအမျိုး၌ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးပျံသန်းကားတစ်စီး system ကိုထူထောင်
Paid အဆိုပါ coachman နှင့် Antalya ကားအခကြေးငွေများမှာ